Kay: Muddo Kordhin ma jiri doonto 2016-ka kaddib - BBC News Somali
Kay: Muddo Kordhin ma jiri doonto 2016-ka kaddib
Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Somalia Nicholas Kay ayaa BBC uga warramay hiigsiga 2016ka, qorshaha samaynta maamul goboleedyo federal ah, iyo in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto Somaaliya.
Wuxuu kaloo ka jawaabay dhaliilo loo jeediyey oo ah inuu si aad ah faraha ugula jiro siyaasadda Somalia.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Nicholas Kay, ayaa sheegay in aysan u muuqan in waqti kordhin loo samayn doono dowladda hadda dalka ka jirta, oo ay tahay in in ay dhamaysato wakhtiga loogu cayimay dastuurka federaalka.
Waraysi uu siiyey BBC-da laanta afka soomaaliga ayuu Nicholas Kay waxa ku sheegay in mudada ay ku egtahay dowladda haatan jirto lagu qayaxay dastuurka federaalka sidaasi darteedna aanu haatan qorshuhu ku jirin in mudo kordhin loo sameeyo dowladda federaalka.
Nicholas kay waxa uu intaasi ku daray in uu ku kalsoonyahay hoggaamiyaasha soomaliya oo u sheegay in ay ka go'aan tahay in ay u hoggaansamaan mudada loo qabtay dowladda federaalka eek u ega septembar 2016-ka.
Halkan ka dhagayso waraysiga Nicholas Kay